Maxaa ku dhacay weeraryahannada La Liga ee Suarez, Bale, Costa iyo Benzema! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Maxaa ku dhacay weeraryahannada La Liga ee Suarez, Bale, Costa iyo Benzema!
Ma ahan mid caadi ah, balse mararka qaar waa ay dhacdaa in weeraryahannada deriska la ah shabaqa ay lumiyaan awooddoodii gool dhalinta, arrintaas oo kale ayayna dhexda kaga jiraan weeraryahannada La Liga kuwooda ugu badan.
Xiddigaha kala ah Diego Costa, Luis Suarez, iyo Gareth Bale ayaa dhammaantood raadinaya qaab ciyaaroodkoodii wacnaa kaasoo tan iyo bilawgii xilli ciyaareedkan uusan noqonin mid qalqal geliya kooxaha kasoo horjeeda.
Weeraryahanka Atletico Madrid ee Costa ayaanan wax gool ah dhalinin xilli ciyaareedkan oo idil isagoo ciyaaray Toddobo kullan oo La Liga ah, waxaana daqiiqada uu gool la’aanta yahay ay gaarayaan 581 daqiiqo.
Asal Brazilian-ka qaranka Spain hadda ka tirsan ayaa abaartan ay usoo billaabatay tan iyo xilli ciyaareedkii hore dhammaadkiisii, waxaana jirtay in 628-dii daqiiqo ee ugu dambeysay xilli ciyaareedkii hore uusan u dabaal degin wax gool ah.
Sidoo kale sheekadan waxa ay taabanaysaa weeraryahannada Real Madrid ee kala ah Gareth Bale iyo Karim Benzema kuwaas oo xambaaray waajibaadka kooxda ee dhanka gool dhalinta maadaama matoorkii gool dhalinta ee Cristiano Ronaldo uu daaqadda ka baxay.
Marka laga soo tago min laba gool oo uu ka dhaliyay Girona iyo Leganes, wax gool ah ma uusan dhalinin, waxaana uu isku dar gool la’aan yahay 369 daqiiqo.
Waxaa in badan aanan ka rooneyn xiddigga ay ka wada tirsanyihiin Los Blancos ee Bale kaasoo isna wax gool ah dhalinin 357 daqiiqo, keliya saddexii kullan ee ugu horreysa La Liga keliya gool dhaliyay.
Weeraryahanka kale ee ay dhibaatada heysato waa Luis Suarez kaasoo waqti adag la qaadanaya Barcelona, waxaana uu dhaliyay keliya saddex gool siddeed ciyaarood, waana bandhig aad u liita marka lala barbar dhigo qaab ciyaareedkiisii caadiga ahaa.
Weeraryahanka reer Uruguay ayaa laba gool ka dhaliyay Huesca hal goolna ka dhaliyay Real Sociedad, wixii ka dambeeyayse, wax gool ah shabaqa ma uusan gelinin.